'Ref aive pamubhadharo wake': Amai vaBryce Hall vanoti mwanakomana wavo aisazokunda 'kurwisa kwakasimba' naAustin McBroom - Pop-Tsika
'Ref aive pamubhadharo wake': Amai vaBryce Hall vanoti mwanakomana wavo aisazokunda 'kurwisa kwakasimba' naAustin McBroom
Ipo iyo Hondo yeMapuratifomu yaive kunyanya pakati peYeTubers neTikToker, chiitiko chaitarisirwa kwazvo, kunze kwekusahadzika, Bryce Hall maringe naAustin McBroom. Parizvino, munhu wese anoziva nezvekuti kurwa kwakaitwa sei.
Bryce akatora kurohwa kubva kuAustin panguva yekutenderera yechitatu yehondo uye akasiyiwa akarembera patambo asati amuka nemakumbo kwechipiri. Nekudaro, muridzi wepembe akaona zvakakwana, uye mutambo wakadaidzwa uchifarira Austin McBroom.
Bryce Hall achangowana DOMINATED @BFFsPod #youtubersvstiktokers pic.twitter.com/CuLirIXtE5
- Barstool Sports (@barstoolsports) Chikumi 13, 2021
Bryce akasara akakuvara, ropa, uye achionekwa achizunzwa, izvo zvakaita kuti muridzi wepembe afonere mutambo. Kunyange angave aikwanisa kuenderera mberi nekurwa kwazviri, sarudzo yemurengeti yaive yekupedzisira.
Kunyange zvakadaro, kwaive kushinga kuyedza kubva kune vese vakwikwidzi, uye iyo bout yaive zvechokwadi inonakidza. Nekudaro, mushure memutambo, zvinhu zvakatora shanduko isingatarisirwi apo, kubva kunze-kwebhuruu, amai vaBryce Hall vakatumira tweet kuti muridzi wemba apihwa mari yekupedzisa kurwa.
NDIANI ANOGONA KUONA IZVI KUUYA: Amai vaBryce Hall vanotaura kuti kurwa pamutambo wetsiva we'YouTube vs TikTok 'zvinonzi zvakabirirwa nekuti baba vaAustin McBroom vakaronga chiitiko ichi uye ma Refs ainzi aive pamubhadharo wake. pic.twitter.com/WIvW10zdcC
Verenga zvakare: Youtubers vs. Tiktokers - Ndiani akakunda iyo Austin McBroom vs.Bryce Hall kurwa?
Amai vaBryce Hall vanoti kurwa kwacho kwakabirirwa
Panzvimbo pekubvumirana naamai vake, iyo nyeredzi TikToker yakava murume mukuru pano nekutumira tweet:
'Hei, ma! Ndichiri kukutengera imba iyoyo, nenzira. '
Zviri pachena kuti akagamuchira mhedzisiro yemutambo uye akaenderera kumberi.
Ini ndinodarika kuzvikudza uye ndinokuda zvakanyanya… zvinoita sekunge moyo wangu uchaputika!
- lyzasmythe (@lyzasmythe) Chikumi 13, 2021
Nekudaro, vanamambure vakapatsanurwa nezve mhedzisiro yemutambo. Heano mamwe maitiro:
Tbh handifunge kuti zvine mutsindo kuti ref akadaidzira kurwa kunyangwe iwe waive nemhino ine ropa uye wakatsikwa, munhu wese achitaura kuti wakarohwa asi iwe wakaramba wakasimba uye ukaedza nepaunogona napo. mubhuku rangu makakunda❤️. kunyangwe iwe usina kuhwina iwe wakaramba uchibvuma kwairi uye waive
- Gabriella Abbott (@ Gabby49105961) Chikumi 13, 2021
ndakada chiitiko zvisinei nemhedzisiro pic.twitter.com/EE0CKBTZB5
- KJ (@ L0KI_KJ) Chikumi 13, 2021
kinda unzwe zvakashata kwaari iye akashanda nesimba kwazvo izvi uye nekuzvimisira zvinangwa zvaasina kuzadzisa pakupedzisira. asi pakupera kwezuva akazvipfuudza uye akaramba achizvishingisa ndokukwira ikoko ndokurwa. kunyangwe asina kukunda ini ndichine kupenga ruremekedzo 4him
- Lana (@Lanadgaf_) Chikumi 13, 2021
Bryce: Ndakakunda kurwa mumigwagwa makumi mana
Migwagwa: #brycehall #youtubersvstiktokers pic.twitter.com/WhgbH2wzOg
- iconic-dj (@Djtoocrazyy) Chikumi 13, 2021
Nhai Bryce ndangouya kuzotaura kuti wanga uchishamisa ipapo uye vateveri vako vanodada newe tinoziva kuti unotarisa zvakanyanya pane izvo uye kungova neushingi hwekuenda kumhete iyoyo kuverenga zvakawanda kunze kwemhedzisiro yawakahwina pane edu moyo inokuda bryce usakanganwe kushamisa kwako
- 𝚑𝚎𝚕𝗈𝚢𝚜𝚎 🇧🇷 (@flawless_gray) Chikumi 13, 2021
ini kurara manheru ano ndichiziva kuti bryce horo yakazowana zvakamukodzera #youtubersvstiktokers pic.twitter.com/p0GPvHqhYp
- Shashikant991 (@ shashii991) Chikumi 13, 2021
Iwe uri munhu anoshamisa zvakadaro iwe unofanirwa nenyika yeBryce asi nyika haina kukodzera iwe, ndinokutendai nekuponesa hupenyu hwemamirioni avanhu (kusanganisira angu) ndinokuda zvisingaite !!<3 pic.twitter.com/yP7UWlgohH
- sara || KUDADA NE H! (@wowdamelios) Chikumi 13, 2021
Izvi iwe pawakabvunzwa ref kuti sei akamira kurwa pic.twitter.com/KZp8rFJYfc
- Waft (@Wagtggs) Chikumi 13, 2021
Nepo vamwe vakabvumirana kuti mutambo wakadanwa kunonoka, vamwe vaive vasina-ruregerero pamusoro paBryce Hall kurasikirwa. Chero nzira, vese varwi vakazvibata uye vakapa vateereri kuita kukuru.
Austin McBroom akabiridzira here?
Kunyangwe paive pasina humbowo hwakaomarara hwekuti muridzi wepereti akabhadharwa kuti apedze nguva yapera, Austin akange azvirumbidza nekutora pasi Bryce Hall munharaunda yekutanga chaimo. Akataura pamberi pehondo:
'Ini ndinongovimba iye (Bryce Hall) akagadzirira nekuti anozonyara mangwana. Haazopedzise apfuura round rekutanga. Angave nerombo rakanaka kusvika padanho repiri. Kana akasvika pakuona denderedzwa repiri, zvinopera ipapo. '
Kunyangwe zvataurwa nezvakataurwa mubhadharo, nenzira dzese, kurwa kwanga kwakanaka. Mutambi akaita sarudzo yekupedzisira maererano nekugona kwevaya vetsiva uye aive mukati mekodzero yake yekumisa mutambo.
Verenga zvakare: Austin McBroom anofanotaura kukunda kukuru paBryce Hall kuYouTubers vs. TikTokers chiitiko
ndinoita sei kuti hupenyu hwangu huve pamwe chete
unokunda sei kutengesa
vanhu vanofunga kuti vanoziva zvese
mienzaniso yekushingaira kuchikoro
sei kusiya hukama hwehukama
kuudza mumwe munhu kuti haumude